Mandeha ny fandaharam-potoana ririnina vaovao ny seranam-piaramanidina Frankfurt: Sidina mankany amin'ny toerana haleha 244 any amin'ny firenena 92
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Mandeha ny fandaharam-potoana ririnina vaovao ny seranam-piaramanidina Frankfurt: Sidina mankany amin'ny toerana haleha 244 any amin'ny firenena 92
Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Fandefasana gazety • Fitaterana • Etazonia Vaovao Vaovao
Anzeigetafel *** Caption eo an-toerana ***
Misy fandaharam-potoana ririnina vaovao manomboka manan-kery ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt (FRA) amin'ny 31 Oktobra. Ny fandaharam-potoana dia ahitana zotram-piaramanidina 83 miasa amin'ny sidina mpandeha mankany amin'ny toerana 244 any amin'ny firenena 92 ​​manerantany.
Sidina vaovao mankany Etazonia azo avy amin'ny FRA
Frankfurt Ny fandaharam-potoanan'ny ririnina dia ahitana sidina marobe mankany Karaiba sy Amerika Afovoany
Toerana Eoropeana maro no nitazona ny fandaharam-potoanan'ny fahavaratra ao amin'ny FRAPORT
Miaraka amin'ny fanafoanana tsikelikely ny fameperana fitsangatsanganana mifandraika amin'ny areti-mifindra, dia azo ampiana toerana sy zotram-piaramanidina bebe kokoa amin'ny fotoana fohy ny fandaharam-potoana. Raha ampitahaina amin'ny seranam-piaramanidina hafa any Alemaina, ny FRA dia hanome ny safidy malalaka indrindra amin'ny fifandraisana amin'ity ririnina ity. Izany dia manasongadina ny anjara asan'i Frankfurt amin'ny maha-ivon'ny sidina iraisam-pirenena lehibe indrindra sy manan-danja indrindra ao amin'ny firenena. Hijanona hatramin’ny 26 martsa 2022 ny fandaharam-potoana ririnina vaovao.
Sidina 2,970 isan-kerinandro (fiaingana), amin'ny antsalany, no kasaina ho an'ny fiandohan'ny ririnina amin'ny Novambra. Izany dia latsaky ny 30 isan-jato raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny taona 2019/2020 (nialoha ny areti-mifindra), fa 180 isan-jato noho ny tamin'ny ririnina 2020/21. Ny totalin'ny sidina voalahatra dia misy serivisy an-trano (intra-Alemana) 380, sidina iraisam-pirenena 620 ary fifandraisana eoropeana 1,970. Seza 520,000 eo ho eo no misy isan-kerinandro - manodidina ny 36 isan-jato eo ambanin'ny tarehimarika ho an'ny 2019/2020.
Maro ny sidina mankany Etazonia azo avy amin'ny FRA
Nitombo be ny isan'ny sidina mankany Etazonia, indrindra noho ny fanambaran'i Etazonia hanokatra ny firenena manomboka ny 8 Novambra ho an'ireo vahiny vahiny - raha toa ka vita vaksiny tanteraka izy ireo ary manome fitsapana Covid-19 ratsy alohan'ny hiaingana.
Misy fifandraisana tsy tapaka avy amin'ny FRA mankany amin'ny toerana 17 any Etazonia amin'ny vanim-potoana ririnina ho avy. Lufthansa (LH), United Airlines (UA), ary Singapore Airlines (SQ) dia hiainga ho any New York isan'andro. Ho fanampin'izany, ny Condor (DE) mpitatitra fialamboly alemà dia hanao sidina dimy isan-kerinandro mankany amin'ny Big Apple manomboka amin'ny Novambra
1. Vokatr'izany dia hisy sidina hatramin'ny dimy isan'andro avy any FRA mankany John F. Kennedy (JFK) na Newark (EWR). Ny Delta Airlines (DL) dia hanidina isan'andro mankany New York-JFK manomboka amin'ny tapaky ny volana Desambra. Ankoatr'izay, ny United Airlines sy Lufthansa dia hanome sidina 20 isan-kerinandro mankany Chicago (ORD) sy Washington DC (IAD).
Lufthansa sy United dia samy hanidina isan'andro ho any San Francisco (SFO) sy Houston (IAH), ary ho any Denver indroa ambin'ny folo isan-kerinandro. Lufthansa sy Delta dia hanao sidina mankany Atlanta (ATL) impolo isan-kerinandro.
Ny toerana hafa any Etazonia dia ahitana an'i Dallas (DFW) sy Seattle (SEA) (ampian'i Lufthansa sy Condor), ary Boston (BOS), Los Angeles (LAX) ary Miami (MIA) (ampian'i Lufthansa). Ankoatr'izay, Lufthansa dia hanome serivisy enina isan-kerinandro ho an'i Orlando (MCO) ary serivisy dimy herinandro ho an'ny Detroit (DTW), ary handeha ho any Philadelphia (PHL) intelo isan-kerinandro. Manomboka amin'ny tapaky ny volana desambra, ny mpitatitra alemà Eurowings Discover (4Y) dia hanao sidina mankany Tampa (TPA) in-efatra isan-kerinandro.
Toerana fialan-tsasatra amin'ny ririnina mahasarika
Ny fandaharam-potoana vaovaon'ny FRA dia ahitana toerana maro isan-karazany any Amerika Afovoany sy Karaiba. Ohatra, Condor, Lufthansa, ary Eurowings Discover dia hanome tolotra ho an'ireo toerana fialan-tsasatra mahafinaritra any Mexico, Jamaika, Barbados, Costa Rica ary ny Repoblika Dominikanina. Anisan’izany ny sidina matetika mankany Punta Cana (PUJ; in-16 isan-kerinandro) sy Cancún (CUN; hatramin’ny roa isan’andro).
Betsaka ny zotram-piaramanidina manohy manolotra sidina avy any Frankfurt mankany amin'ny toerana any Afovoany sy Atsinanana. Miankina amin'ny fivoaran'ny fameperana fitsangatsanganana Covid-19 napetraky ny firenena aziatika sasany, mety hitombo bebe kokoa ny isan'ny fifandraisana amin'ny Far East. Ny toe-draharaha dia mbola mavitrika: Thailand, ohatra, mikasa ny hanokatra ny sisin-taniny amin'ny Novambra. Ny sidina mankany Singapore (SIN) tanterahin'ny Lufthansa sy Singapore Airlines ao anatin'ny faritry ny lalantsara fitsangatsanganana ho an'ny mpandeha vita vaksiny dia ho hita ihany koa amin'ny vanim-potoana ririnina.
Ny ankamaroan'ny zotram-piaramanidina dia nanohy ny serivisy mankany amin'ny toerana Eoropeana avy amin'ny FRA amin'ity fahavaratra ity. Mbola hitohy mandritra ny ririnina ireo. Azo atao ny manidina avy any FRA mankany amin'ireo tanàna lehibe eoropeana rehetra imbetsaka isan'andro. Ny fandaharam-potoanan'ny ririnina dia ahitana toerana fizahan-tany malaza maromaro any Eoropa, anisan'izany ny Nosy Balearic, ny Canaries, Gresy, Portiogaly ary Torkia.
Ny fampahalalana vaovao momba ny sidina misy dia azo jerena ao amin'ny www.fjkm-airport.com